पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको अण्डलाई निश्चित समयसम्म भण्डार गरेर आफूलाई सहज भएको बेलामा बच्चा जन्माउन कत्तिको सम्भव छ ? सामान्यतया महिलाहरूले ३५ वर्षभन्दाअघि नै बच्चा जन्माउनु आमा र बच्चाको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर विभिन्न कारणले ३० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउन अनुकुल भएन भने के गर्न सकिन्छ ?
चिकित्सकहरू कुनै पनि जोखिमविना नै आफूलाई मन लागेको बेलामा गर्भधारण गर्न सकिने बताउँछन् । अल्का अस्पतालकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता सिंह वीर्य र अण्ड भण्डारण गरेर आफू अनुकुल गर्भधारण गर्न सकिने बताउँछिन् ।
वीर्य तथा अण्ड भण्डारणका पनि केही विधि र अवस्थाहरू छन् । जस्तो, रेडियोथेरापी र किमोथेरापी गरिरहेका महिला तथा पुरुषको लागि शुक्रकिट तथा अण्ड भण्डारण प्रभावकारी बन्न सक्ने डा. सिंह सुनाउँछिन् ।
क्यान्सर तथा अन्य रोग लागेर रेडियोथेरापी तथा किमोथेरापी गरिरहेका बिरामीको वीर्य तथा अण्डबाट गर्भधारण कठिन रहेकोले त्यस्तालाई वीर्य भण्डारण प्रभावकारी रहेको उनी सुनाउँछिन् ।
कति समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ, शुल्क कति लाग्छ ?
वीर्य भण्डारण नेपालमा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको चलन हो । यो आफैंमा वैध प्रणाली पनि हो । तर धेरैजना यसप्रति बेखबर हुँदा यसका प्रयोगकर्ताहरू धेरै नबढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । डा. सिंह वीर्य वा अण्ड दुवैको भण्डारणको अधिकतम समय नतोकिएको बताउँछिन् ।
२०७९ जेष्ठ २१, शनिबार ०५:५५ 1 Minute 136 Views